Global Voices नेपालीमा » भिडियो: जापानी बिरालोहरू हिउँदमा कसरी न्यानो भएर बस्छन्? · Global Voices नेपालीमा » Print
भिडियो: जापानी बिरालोहरू हिउँदमा कसरी न्यानो भएर बस्छन्?
अनुवाद पोष्ट गरिएको9जुलाई 2017 4:11 GMT 1	 · लेखक Nevin Thompson अनुवादक Deb Tamrakar
श्रेणी : पूर्व एशिया, जापान, Good News, नागरिक मिडिया
‘कोटाट्सु'मा एउटा बिरालो।Kagoneko को यूट्युब च्यानलबाट ।
जापानमा हिउँद शुरू भएको छ । ५४ बर्षमा पहिलो पटक नोभेम्बर २४ बिहीबारको दिन  टोकियोमा हिमपात भएको छ। जापानमा अप्रत्याशित हुनसक्ने हिमपातले असहज हिउँदे मौसमको सुरुवातको संकेत गर्दछ।
सर्वव्यापी एअर कंडिशनिंगको कारणले उष्ण ग्रीष्म महिनाहरु पनि सहनीय बन्न सकिन्छ तर अन्य विकसित राष्ट्रहरुमा जस्तै जापानमा केन्द्रीय तापन व्यापक नभएको  कारण त्यहाँको ठण्डा हिउँदे महिनाहरु क्रुर हुन सक्छन्। धेरै मानिसहरु न्यानो बनाइराख्न मट्टीतेल हिटर मा भरोसा गर्छन् र साथसाथै होचो काठको टेबल वरिपरि भारी कम्बल र मुनि हिटरबाट न्यानो बनाइएको कोटाट्सु मा पनि धेरै भर पर्छन्।
कोटाट्सु शब्दले मानिसहरु सहितको अरु प्राणीको आरामदायी र न्यानोपनको प्रतिबिम्बित गर्छ। विधुत्तिय हिटर नजिकै, कम्बल भित्र र टेबल मुनि प्रायजसो घरपालुवा विरालोहरु सुतिरहेको पाउनुले कोटाट्सु धेरै नै मन पराइएको देखिन्छ।
जापानीज ब्लग फन्डो द्वारा रिपोर्ट गरिए अनुसार युट्युब ब्लग कागोनेकोले (かご猫 Ｂｌｏｇ , “बक्समा बिरालो” ब्लग) आराम र न्यानोपनको यस् सर्वोत्कृष्ट जापानीज हिउँदे नजारा उतारेका छन्। यस् ब्लगले बिरालो कोटाट्सु भित्र गुटुमुटु पर्दै बसेको बिरालोको भिडियोहरु  नियमित रुपमा अपलोड गर्दछ।
बिरालोले पनि मट्टीतेल हिटर नजिकैको न्यानोस्थललाई अधिकार जमाउँदै गरेको अवस्था। नेकोबाको ब्लगले देखाएको उत्कृष्ट दृश्य:
नियमित अपडेटका लागि नेकोकागो ब्लग  हेर्नुहोस्।
URL to article: https://ne.globalvoices.org/2017/07/09/1050/
 Kagoneko को यूट्युब च्यानलबाट: https://youtu.be/62vGNTqJ2-k
 जापानमा हिउँद शुरू भएको छ: http://mainichi.jp/photography/
 ५४ बर्षमा पहिलो पटक नोभेम्बर २४ बिहीबारको दिन: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/24/national/meteorological-agency-warns-overnight-snowfall-cause-transportation-delays/
 जापानमा केन्द्रीय तापन व्यापक नभएको: http://www.japantimes.co.jp/community/2013/11/04/how-tos/warming-up-for-the-winter-chill/#.WDZvDeYrKUk
 मट्टीतेल हिटर: http://japaninfoswap.com/using-kerosene-heaters-in-japan/
 बिरालोको भिडियोहरु: https://www.youtube.com/user/shironekoshiro/videos?flow=list&live_view=500&view=0&sort=dd